ဘနျလေ ဝ-၁ မနျယူပှဲပွီး အဓိကပွောစရာအခကျြ(၅)ခကျြ – Premier League Special
ဘနျလေ ဝ-၁ မနျယူပှဲပွီး အဓိကပွောစရာအခကျြ(၅)ခကျြ
January 13, 2021 yeminn Article 0
ဘနျလနေဲ့အဝေးကှငျးပှဲမှာ ပေါဂျ့ဘာရဲ့တဈလုံးတညျးသောအနိုငျဂိုးကွောငျ့ မနျယူဟာ ပရီးမီးယားလိဂျအမှတျပေးဇယားမှာ ထိပျဆုံးနရောကို တကျလှမျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ခကျခကျခဲခဲကစားခဲ့ရပမေယျ့ ထိုကျတနျတဲ့နိုငျပှဲတဈပှဲဖွဈခဲ့ပွီး စိုးမိုးကစားနိုငျခဲ့တဲ့ ဒုတိယပိုငျးရဲ့ပှဲပွီးဖို့ ၁၉ မိနဈအလိုမှာ အဲဒီပွငျသဈသားကှငျးလယျလူက အနိုငျဂိုးသှငျးယူပေးခဲ့တာပါ။
ဒီနပှေဲ့စဉျအနိုငျရယူနိုငျခဲ့မှုမှာလညျး မကျဂှိုငျးယားဟာ အသငျးခေါငျးဆောငျပီသလုပျဆောငျမှုတှရှေိခဲ့ပွီး ဒိုငျရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေိုထောကျပွ ဝဖေနျမှုတှကေိုလညျးပွုလုပျခဲ့သလိုပထမပိုငျးကတညျးက မနျယူအသငျး ဦးဆောငျဂိုးစရနိုငျစမေယျ့ သှငျးဂိုးတဈဂိုးကိုလညျးသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကှငျးလယျဒိုငျက မကျဂှိုငျးယားဟာ ပွိုငျဘကျနောကျခံလူကို ဖိပွီးခေါငျးတိုကျဂိုးသှငျးတယျဆိုကာ ဂိုးအဖွဈ အသိအမှတျမပွုခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယပိုငျးက ခွစှေမျးကောငျးဟာ မနျယူ အမှတျပွညျ့ရဖို့ လုံလောကျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီပှဲက အဓိကပွောစရာအခကျြတှကေို ထုတျနှုတျရမယျဆိုရငျ….
ဘနျလနေဲ့ ပှဲကနျြမှာ အမှတျပွညျ့ယူနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ မနျယူဟာ ဆိုးလျရှားလလျထကျ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ပရီးမီးယားလိဂျအမှတျပေးဇယားမှာ ထိပျဆုံးရောကျခဲ့တာပါ။ အဲဒီမတိုငျခငျ အမှတျပေးဇယားကို နောကျဆုံးဦးဆောငျနိုငျခဲ့တာက ၂၀၁၇ စကျတငျဘာမှာ ဖွဈပါတယျ။ နှဈတဈနှဈရဲ့အစမှာ အမှတျပေးဇယားကို နောကျဆုံးဦးဆောငျနိုငျခဲ့တာက ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီကဖွဈပွီး အဲဒီတုနျးက ရာသီအဆုံးသတျမှာ စံခြိနျတငျအကွိမျ ၂၀ မွောကျအဖွဈ ဗိုလျစှဲနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီတဈကွိမျရော အဲဒီလိုထပျဖွဈနိုငျဦးမလား။
အထူးသဖွငျ့ ပထမပိုငျးမှာ ကှငျးလယျဒိုငျနဲ့ VAR ဒိုငျတှဆေီက အဓိကဆုံးဖွတျခကျြတှဟော မနျယူအတှကျ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ ကာဗာနီဟာ ဘနျလခေံစဈတနျး နောကျဆုံးလူရဲ့ဖကျြထုတျမှုနဲ့ကွုံခဲ့ရပါတယျ။ ဘနျလပေငျနယျတီဧရိယာစပျနား ဖရီးကဈရမှာဖွဈသလို ပွိုငျဘကျနောကျခံလူဟာ အဝါကနေ အနီထိဖွဈသှားနိုငျတဲ့ အနအေထားမှာ ရှိခဲ့တာပါ။
ဒါပမေဲ့ အဲဒီမတိုငျခငျ လုချရှောက ၅၀-၅၀ အနအေထားမှာ ပွိုငျဘကျကစားသမားဂတျမနျဆနျကို တားဆီးမှုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီတော့ မနျယူဟာ ဖရီးကဈရမယျ့အစား ဖရီးကဈပေးလိုကျရတယျ။
အဲဒီနောကျ လုချရှောရဲ့ဖွတျတငျမှုကနေ မကျဂှိုငျးယားဂိုးသှငျးခဲ့ပမေယျ့ ပွိုငျဘကျကစားသမားဖိတိုကျတယျဆိုပွီး ဂိုးအဖွဈ အသိအမှတျပွုခံရခွငျး မရှိခဲ့ဘူး။
ဘနျလရေဲ့ကွံ့ကွံ့ခံမှုကို ထိုးဖောကျကြျောဖွတျခဲ့တဲ့ ပေါ့ဂျဘာရဲ့ဂိုး
မိနဈ ၇၀ တိုငျ မနျယူတိုကျစဈကို ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ အဲဒီအခြိနျမှာ ဘနျလဟော သူတို့လုပျနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျမှုရှိနမှောပါ။
ဒါပမေဲ့ ပေါ့ဂျဘာရဲ့ မွမေကကြနျခကျြပွငျးပွငျး ဘနျလအေတှကျ ဘယျလိုမှ မတတျသာ ဖွဈသှားပါတယျ။ ဧရိယာအစပျမှာ ရကျရျှဖို့ဒျရဲ့ဖွတျတငျဘောကနေ ရရှိတဲ့ဘောလုံးကို ပေါ့ဂျဘာက ပါဝါအပွညျ့နဲ့ကနျခဲ့ရာမှာ ဘနျလဂေိုးသမားအတှကျ ဘယျလိုမှ အခှငျ့အရေးမရှိခဲ့ဘူး။
ပွိုငျပှဲအရပျရပျ ၉ ပှဲကစားရမယျ့ လတဈခုမှာ အသငျး လနျးလနျးဆနျးဆနျးရှိဖို့က အရေးပါပွီး ဘနျလနေဲ့ပှဲဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဗုဒ်ဓဟူးနောကျပိုငျး မနျယူကစားရတဲ့ တတိယမွောကျပှဲစဉျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆိုးလျရှားအနနေဲ့ ဝကျဖို့ဒျနဲ့အကျဖျအဖေလားပှဲက လူစာရငျးကို ၁၀ ယောကျအထိ အပွောငျးအလဲလုပျခဲ့တာဟာ အံ့အားသငျ့စရာ မရှိပါဘူး။
အဲဒီမှာ ပွနျပါလာတဲ့တဈယောကျတညျးသောသူက နောကျခံလူအဲရဈဘိုငျလီပါ။ အဲဒီအိုငျဗရီကို့ဈသားဟာ အခုဆို မနျယူရဲ့နောကျဆုံးပရီးမီးယားလိဂျ ၄ ပှဲစလုံးမှာ ပါဝငျခဲ့ပွီး သူပါဝငျတဲ့ အဲဒီ ၄ ပှဲမှာ ၂ ပှဲတိုငျ ဂိုးမပေးခဲ့ရပါဘူး။
အခုတော့ မနျယူဟာ ကာလရှညျ ခါးသီးပွိုငျဘကျလညျးဖွဈ၊ လကျရှိခနျြပီယံပွိုငျဘကျလညျးဖွဈတဲ့ အဆငျ့ ၂ နရောက လီဗာပူးနဲ့ လာမယျ့တနင်ျဂနှေ အနျဖီးလျမှာ သှားရောကျရငျဆိုငျရတော့မှာပါ။ လကျရှိထိပျဆုံးနှဈသငျးတှကွေ့မှာဆိုတော့ ပိုလို့တောငျ စိတျဝငျစားစရာကောငျးသှားတယျ။
လီဗာပူးကို ပူပူနှေးနှေးကြျောတကျပွီး ဇယားထိပျရောကျလာတဲ့ မနျယူဟာ အနျဖီးလျမှာသာ အောငျပှဲဆငျနိုငျမယျဆိုရငျ လကျရှိခနျြပီယံအသငျးကို ၆ မှတျဖွတျနိုငျမှာပါ။
ဘန်လေ ဝ-၁ မန်ယူပွဲပြီး အဓိကပြောစရာအချက်(၅)ချက်
ဘန်လေနဲ့အဝေးကွင်းပွဲမှာ ပေါဂ့်ဘာရဲ့တစ်လုံးတည်းသောအနိုင်ဂိုးကြောင့် မန်ယူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရပေမယ့် ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး စိုးမိုးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယပိုင်းရဲ့ပွဲပြီးဖို့ ၁၉ မိနစ်အလိုမှာ အဲဒီပြင်သစ်သားကွင်းလယ်လူက အနိုင်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ပွဲစဉ်အနိုင်ရယူနိုင်ခဲ့မှုမှာလည်း မက်ဂွိုင်းယားဟာ အသင်းခေါင်းဆောင်ပီသလုပ်ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့ပြီး ဒိုင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထောက်ပြ ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သလိုပထမပိုင်းကတည်းက မန်ယူအသင်း ဦးဆောင်ဂိုးစရနိုင်စေမယ့် သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးကိုလည်းသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင်က မက်ဂွိုင်းယားဟာ ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူကို ဖိပြီးခေါင်းတိုက်ဂိုးသွင်းတယ်ဆိုကာ ဂိုးအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယပိုင်းက ခြေစွမ်းကောင်းဟာ မန်ယူ အမှတ်ပြည့်ရဖို့ လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲက အဓိကပြောစရာအချက်တွေကို ထုတ်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်….
အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံး – ဘန်လေနဲ့ ပွဲကျန်မှာ အမှတ်ပြည့်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် မန်ယူဟာ ဆိုးလ်ရှားလလ်ထက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားမှာ ထိပ်ဆုံးရောက်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီမတိုင်ခင် အမှတ်ပေးဇယားကို နောက်ဆုံးဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာက ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အစမှာ အမှတ်ပေးဇယားကို နောက်ဆုံးဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာက ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီကဖြစ်ပြီး အဲဒီတုန်းက ရာသီအဆုံးသတ်မှာ စံချိန်တင်အကြိမ် ၂၀ မြောက်အဖြစ် ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်ရော အဲဒီလိုထပ်ဖြစ်နိုင်ဦးမလား။
မန်ယူအတွက် ဆန့်ကျင်ဘက်ဒိုင်အဆုံးအဖြတ်တွေ – အထူးသဖြင့် ပထမပိုင်းမှာ ကွင်းလယ်ဒိုင်နဲ့ VAR ဒိုင်တွေဆီက အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ မန်ယူအတွက် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကာဗာနီဟာ ဘန်လေခံစစ်တန်း နောက်ဆုံးလူရဲ့ဖျက်ထုတ်မှုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဘန်လေပင်နယ်တီဧရိယာစပ်နား ဖရီးကစ်ရမှာဖြစ်သလို ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူဟာ အဝါကနေ အနီထိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမတိုင်ခင် လုခ်ရှောက ၅၀-၅၀ အနေအထားမှာ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားဂတ်မန်ဆန်ကို တားဆီးမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မန်ယူဟာ ဖရီးကစ်ရမယ့်အစား ဖရီးကစ်ပေးလိုက်ရတယ်။ အဲဒီနောက် လုခ်ရှောရဲ့ဖြတ်တင်မှုကနေ မက်ဂွိုင်းယားဂိုးသွင်းခဲ့ပေမယ့် ပြိုင်ဘက်ကစားသမားဖိတိုက်တယ်ဆိုပြီး ဂိုးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း မရှိခဲ့ဘူး။
ဘန်လေရဲ့ကြံ့ကြံ့ခံမှုကို ထိုးဖောက်ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာရဲ့ဂိုး – မိနစ် ၇၀ တိုင် မန်ယူတိုက်စစ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အဲဒီအချိန်မှာ ဘန်လေဟာ သူတို့လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မှုရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာရဲ့ မြေမကျကန်ချက်ပြင်းပြင်း ဘန်လေအတွက် ဘယ်လိုမှ မတတ်သာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဧရိယာအစပ်မှာ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ရဲ့ဖြတ်တင်ဘောကနေ ရရှိတဲ့ဘောလုံးကို ပေါ့ဂ်ဘာက ပါဝါအပြည့်နဲ့ကန်ခဲ့ရာမှာ ဘန်လေဂိုးသမားအတွက် ဘယ်လိုမှ အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ဘူး။
တစ်သင်းလုံးနီးပါးအပြောင်းအလဲနဲ့ – ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ် ၉ ပွဲကစားရမယ့် လတစ်ခုမှာ အသင်း လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိဖို့က အရေးပါပြီး ဘန်လေနဲ့ပွဲဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနောက်ပိုင်း မန်ယူကစားရတဲ့ တတိယမြောက်ပွဲစဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့အက်ဖ်အေဖလားပွဲက လူစာရင်းကို ၁၀ ယောက်အထိ အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့တာဟာ အံ့အားသင့်စရာ မရှိပါဘူး။ အဲဒီမှာ ပြန်ပါလာတဲ့တစ်ယောက်တည်းသောသူက နောက်ခံလူအဲရစ်ဘိုင်လီပါ။ အဲဒီအိုင်ဗရီကို့စ်သားဟာ အခုဆို မန်ယူရဲ့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ် ၄ ပွဲစလုံးမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး သူပါဝင်တဲ့ အဲဒီ ၄ ပွဲမှာ ၂ ပွဲတိုင် ဂိုးမပေးခဲ့ရပါဘူး။
ခါးသီးပြိုင်ဘက်နဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်း – အခုတော့ မန်ယူဟာ ကာလရှည် ခါးသီးပြိုင်ဘက်လည်းဖြစ်၊ လက်ရှိချန်ပီယံပြိုင်ဘက်လည်းဖြစ်တဲ့ အဆင့် ၂ နေရာက လီဗာပူးနဲ့ လာမယ့်တနင်္ဂနွေ အန်ဖီးလ်မှာ သွားရောက်ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။ လက်ရှိထိပ်ဆုံးနှစ်သင်းတွေ့ကြမှာဆိုတော့ ပိုလို့တောင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသွားတယ်။ လီဗာပူးကို ပူပူနွေးနွေးကျော်တက်ပြီး ဇယားထိပ်ရောက်လာတဲ့ မန်ယူဟာ အန်ဖီးလ်မှာသာ အောင်ပွဲဆင်နိုင်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းကို ၆ မှတ်ဖြတ်နိုင်မှာပါ။
ခြဲလျဆီးရဲ့အစဥျအလာဆိုးလမျးကွောငျးပျေါမှာရှိနတေဲ့ တီမိုဝါနာနဲ့ ကိုငျဟာဗကျဇျ(ဆောငျးပါး)
ပေါ့ဂျဘာ နဲ့ ဘိုငျလီတို့အောငျပှဲခံပုံကို ပေါလျအငျ့ဈ-ဂဈ အတှဲအောငျပှဲခံပုံနဲ့ ခိုငျးနှိုငျးခဲ့တဲ့ ဂယျရီနဗီးလျ